Njirimara, ụdị na ike nke igwe mmadụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Enwere ike ịkọwa oke ikuku dị ka akụkụ buru ibu nke ikuku nwere ndọtị kwụ ọtọ nke ọtụtụ narị kilomita. Ọ nwere anụ ahụ Njirimara dị ka okpomọkụ, mmiri ọdịnaya na vetikal okpomọkụ grajentị ndị ọzọ ma ọ bụ obere edo. Ebe ọ bụ na igwe ikuku Ha dị ezigbo mkpa maka ihu igwe na ihu igwe, anyị ga-arara edemede a zuru oke iji mara njirimara ha na ike ha.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe niile metụtara igwe ikuku, nke a bụ post gị.
1 Tydị ikuku ikuku
2 Ihe omimi nke ikuku
2.1 Coriolis mmetụta
2.2 Ifufe Geostrophic
2.3 Esemokwu esemokwu na gburugburu Ekman
Tydị ikuku ikuku
Dịka anyị kwurula na mbụ, oke ikuku a nke nwere ndọtị dị larịị na ụfọdụ njirimara anụ ahụ bụ ihe anyị na-akpọ ikuku ikuku. A na-ekewa ha dịka ihe anụ ahụ ha nwere, karịchaa site na okpomọkụ. Dabere na ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku ikuku anyị na-ahụ igwe mmadụ dị oyi, dị ka arctic na polar, ma ọ bụ ọkụ, dị ka igwe ikuku nke ebe okpomọkụ. E nwekwara ụdị nhazi ọkwa ndị ọzọ dịka iru mmiri ya si dị, ya bụ, ọdịnaya alụlụ mmiri ya. Igwe ikuku na ntakịrị ọdịnaya dị na mmiri mmiri ka a na-akpọ kọntinent. N'aka nke ọzọ, ndị ahụ ọ bụrụ na ha abịa iru mmiri, ha bụ ndị maritime, n’ihi na ha na-adịkarị n’ebe ndị dị nso n’oké osimiri.
Enwere mpaghara ọnọdụ dị n'etiti ebe anyị na-ahụ igwe ikuku n'oge oyi na ọkọchị ma ha na-efekọ n'ụdị ha. Mpaghara ndị a bụ ihe a na-akpọ ihu ikuku na mpaghara mpaghara njikọta ọnụ.
Ihe omimi nke ikuku
Ugbu a, anyị ga-enyocha ike mmụọ nke igwe ikuku iji ghọtakwuo banyere ya. E nwere mmeghari na ikuku nke ikuku nke ikuku nke ikuku nke di n'elu uwa. Nke a mmegharị nke ikuku pụta a maara dị ka nsogbu grajentị. Ikuku na-esi n’ebe a na-enwekarị nrụgide gaa n’ebe e nwere obere. Nkesa a bụ ihe na - egosi ikuku ma ọ bụ grajenti.
A na-akọwa grajentị site na nrụgide nrụgide anyị nwere ike ịchọta. Ọdịiche nrụgide dị elu karịa ike ikuku na-ekesa. Esemokwu ndị a na ụkpụrụ nrụgide nke ụgbọ elu na-ahụ maka mgbanwe na osooso nke igwe ikuku. Egosiputa osooso a dika mgbanwe nke ike site na otu ndi mmadu ma na ndi ozo. A na-akpọ osooso a ikike nke gradient gradient. Uru nke ike a na-adaba na njupụta nke ikuku ma na-adaba na gradient nrụgide.
El mmetụta coriolis Ihe kpatara ya bu nrughari nke uwa. Ọ bụ ngbanwe nke ụwa na-emepụta na igwe ikuku n'ihi eziokwu nke inwe ntụgharị ntụgharị. Ngbanwe a nke mbara ala na-emepụta na ikuku ikuku site na ntụgharị usoro a maara dị ka mmetụta Coriolis.
Ọ bụrụ na anyị enyochaa ya site n'echiche nke geometric, enwere ike ịsị na igwe ikuku dị ka a ga - asị na ha na - aga n’ihu n’usoro ịhazi ọrụ. Ogo nke ikike Coriolis site na otu ngwongwo dabara na ọsọ ọsọ nke ikuku na-ebu n'oge ahụ yana ọsọ ọsọ nke ntụgharị ụwa. Ike a dịkwa iche dabere na ohere anyị nọ na ya. Dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị nọ na Equator, yana ohere latitude 0, a ga-akagbu ikike Coriolis kpamkpam. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị aga na mkpanaka ahụ, ebe a bụ ebe anyị na-ahụ ụkpụrụ Coriolis kachasị elu, ebe ọ bụ na latitude bụ ogo 90.
Enwere ike ịsị na ndị agha Coriolis na-eme ihe ọ bụla oge niile na usoro ikuku. N'ụzọ dị otú a, enwere ntụgharị gaa n'aka nri mgbe ọ bụla anyị nọ n'akụkụ ugwu, yana n'aka ekpe ma ọ bụrụ na anyị nọ n'akụkụ ndịda.
N'ezie na oge ị nụrụ ya oge ụfọdụ ma ọ bụ na akụkọ. The geostrophic ifufe bụ nke a hụrụ na ikuku efu site na elu nke mita 1000 ma na-afụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ niile na gradient nrụgide. Ọ bụrụ na ị na-agbaso ụzọ nke ikuku geostrophic, ị nwere ike ịchọta isi ihe nrụgide dị elu n'aka nri na obere nrụgide dị n'akụkụ aka ekpe na ugwu ugwu.
Site na nke a, anyị nwere ike ịhụ na ike nke gradient gradient guzobere n'ụzọ zuru oke site na ike Coriolis. Nke a bụ n'ihi na ha na-eme otu ụzọ, mana na ntụgharị ya. Ọsọ nke ikuku a dị n'agbata oghere latitude. Ọ pụtara na maka otu gradient gradient a jikọtara ya na ifufe geostrophic, anyị ga-ahụ etu ọsọ mgbasa si agbadata ka anyị na-aga n'ebe ugwu dị elu.
Esemokwu esemokwu na gburugburu Ekman
Anyị na-aga n’ihu ịkọwa akụkụ ọzọ dị mkpa na ike mmụọ nke igwe mmadụ. Nsogbu ikuku, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ a na-ewere ya dị ka ihe na-adịghị mma, ekwesịghị ịdị. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na esemokwu o nwere na ụwa nwere mmetụta dị oke mkpa na nkwụsị ikpeazụ. Ọ na - eme ka ikuku ikuku belata mgbe ọ dị nso n’elu ala na uru dị n’okpuru ikuku geostrophic. Ọzọkwa, eme ka ọ gafere isobars ọzọ obliquely na ntụziaka nke gradient nrụgide.
Esemokwu esemokwu na-arụ ọrụ mgbe niile na ntụgharị ihu na mmegharị ya na igwe ikuku. Ọ bụrụ na ogo nke enweghị ikike gbasara isobars na-ebelata, mmetụta esemokwu na-ebelata, ka anyị na-abawanye n'otu ogo, ihe dịka 1000 mita. N'ebe a ka ifufe bu geostrophic na ike esemokwu ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị. Dika ngbagha nke ike di n’elu uwa, ifufe na-eburu uzo gburugburu nke amara dika Ekman Spiral.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ike Ọnọdụ nke ikuku ikuku dị mgbagwoju anya. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ya ma kọwaa ụfọdụ obi abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Igwe ikuku